Ihe Emoji dị n'ahịrị isiokwu gị ọ na-emepe ọnụ ahịa email? ? | Martech Zone
Ihe Emoji dị n'ahịrị isiokwu gị ọ na-emepe ọnụ ahịa email? ?
Tuesday, July 18, 2017 Tuesday, July 18, 2017 Douglas Karr
Anyị ekekọrịtala ụfọdụ nkọwa n'oge gara aga banyere otu ụfọdụ ndị ahịa na-etinye emojis n'ime nkwukọrịta ahịa ha. Na ememe nke Ebọchị Emoji Worldwa - ee… enwere ụdị ihe ahụ - Mailjet mere ụfọdụ ule site na iji emojis na ahịrị isiokwu email iji hụ etu emojis dị iche nwere ike isi metụta ya email emeghe ọnụego. Maa amụma? Ọ rụpụtara!
Usoro: Mailjet awade nnwale atụmatụ mara dị ka a / x ule. Nyocha A / X na-ewepu echiche nke ihe na-arụ ọrụ kacha mma site na ikwe ka ịnwale ọdịiche (ruo 10) nke otu email ahụ, chịkọta arụmọrụ nke ụdị ọ bụla, wee ziga nsụgharị mmeri na nke fọdụrụ na ndepụta gị. Nke a na-enye ndị na-ezigara email ohere kachasị mma iji bulie arụmọrụ nke email gị.
A na-ebipụta ihe nchoputa nke ule Mailjet na infographic a, Nnwale Ule Emoji, nke na-enye ihe akaebe na emoticons na usoro isiokwu nwere ike imetụta oke imeghe. Ọbụghị naanị nke ahụ, ozi infographic na-enye ihe akaebe na ọdịbendị dị iche iche na-anabata nnabata emojis! United Kingdom, United States, France, Spain, na Germany bụ nke a nwalere.
Etu esi esi tinye Emoji na Usoro Isiokwu?
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ emoji (ma ọ bụ onye na-emegbu mmadụ), ọ ga-abụrịrị na ị na-akụ mkpụrụ menu emoticon na keyboard gị. mana nke ahụ anaghị adị na desktọọpụ yabụ kedu otu ị ga esi eme ya? Easiestzọ kachasị mfe achọtara m bụ ịnyagharịa na Nweta Emoji ebe ị pụrụ nanị idetuo na mado emoji nke ị họọrọ!
Anyị na-enweta Emoji'd karịrị?
Otu n'ime nkwubi okwu nke ọmụmụ ahụ nwere ike ịbụ na, ọ bụ ezie na emoticons na-emetụta ọnụego mmeghe, enwere ike iji ha mebiga ihe ókè ma ọ bụ ndị debanyere aha nwere ike iji ha eme ihe. Ọnụ ọgụgụ zuru ezu na-emeghe ọnụego na emojis agbadaala afọ karịa afọ site na 31.5% na 28.1%
Ọ bụ ebe nkịtị ugbu a iji emojis na azụmaahịa email ma ọ ga-abụ na anyị ga-ahụ ọtụtụ n'ime ha dịka Google na-ekwupụta ụdị akara ngosi ọhụụ ọhụụ maka sistemụ arụmọrụ gam akporo ya kachasị ọhụrụ. Agbanyeghị, ọ bụ ihe ịrịba ama nye ndị ahịa na ikekwe elu ha abịala. A ka nwere ọtụtụ ihe anyị nwere ike ịmụta site na emoji n'agbanyeghị na nyocha a na-egosi mkpa ọ dị ịmara ndị na-ege gị ntị ka ha jiri email zie ozi nke ọma. Ndị na-ere ahịa kwesịrị iburu n'uche ọdịiche ọdịbendị siri ike mgbe a bịara n'ihe nnabata, kamakwa ndakọrịta usoro. Dị ga-achọ ihe ọzọ na-esote na njikọta na mkpa ịmara ọkwa niile dị iche iche a ga-egosipụta email ha ma nwalee ụzọ ọ bụla ha zubere iji mee ihe ndị a. Josie Scotchmer, onye njikwa ahịa UK na Mailjet
Site n'ụzọ, onye kachasị egwu bụ ihe dị mfe acha ọbara ọbara emojiEmoji bụ otu n'ime ole na ole iji mepụta nsonaazụ dị mma gafere mpaghara nyocha niile na mmụba 6% na ọnụego emeghe.
Tags: a / xanwale uledetuo emojiemail isiokwu akaraEmojiemoji isiokwuemoticonsotúmailjetmado emojiUsoro isiokwu
5 Design Elements nke na-arụ ọrụ nke ọma maka mgbanwe ekwentị
Otu ndị na-ere ahịa ahịa ga-esi gbochie ọghọm ịga ụlọ ngosi